आयल निगमको गाडीमा तस्करी धन्धा चलाउने को ? – Janacharcha.com
» आर्थिक अंक: 1810
आयल निगमको गाडीमा तस्करी धन्धा चलाउने को ?
Janacharcha.com मंगलबार, कार्तिक २६, २०७६ मा प्रकाशित
नेपाल आयल निगम (संस्थान)को गाडी तस्करीमा प्रयोग हुने गरेको पाईएको छ । आयाल निगमको विराटनगर एयरपोर्ट शाखा अन्तिर्गत रहेको बा १ ञ १६६८ पहेलो नम्बर प्लेटको गाडी तस्करीमा प्रयोग हुने गरेको पाईएको हो ।
आईतवार उक्त गाडीको प्रयोग गरी ६ थान राइसकुकर र थुप्रै लत्ता कपडाहरु विना भन्सार नेपाल भित्र्याईरहेको अवस्थामा शसस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको थियो ।
नजिकै रहेको भारतिय बजार जोगबनीवाट तस्करी गरी समानहरु नेपाल भित्र्यादै गरेको अवस्थामा प्रहरीले गाडिसहित समानहरु रंगहात पक्राउ गरेको थियो ।
ठुलो मात्रामा भेटिएका उक्त समानहरु व्यक्तिगत प्रयोजनका लागी भन्दा व्यापारीक बेचबिखनको लागी तस्करी गरी ल्याइएको हुन सक्ने स्राते बताउछ । स्रोत भन्छ “६ वटा कुकर भेटिएको छ, लत्ता कपडाहरुपनि थुप्रै छन् , एउटा परिवारले प्रयोग गर्ने समान यति धेरै हुदैन्, बेचबिखनकै लागी तस्करी गरिएको हुनुपर्छ”
प्रायजासो सिमाना क्षेत्रमा आईराख्ने उक्त गाडी व्यवसायीक रुपमै तस्करीमा प्रायोग हुदै आएको स्रोतको दावी छ ।
उक्त गाडी संस्थानको कुन कर्मचारीले प्रायोग गर्ने गरेको भन्ने कुरा दुई दिन बितिसक्दा पनि खुल्न सकेको छैन् । यसरी कर्मचारीको परिचय नखुलिदा तस्करी गर्ने कर्मचारीको संरक्षण गर्न तर्फ आयल निगमको जिम्मेवार व्यक्तिहरु लागेको हुने सक्ने आशंका उब्जिएको छ ।
सरकारी गाडी झैं संस्थानको गाडी पनि निजि कामको लागी प्रयोग गर्न पाईदैन । अझ तस्करीकै लागी संस्थानको गाडी प्रायोग हुनु भनेको गम्भीर विषय हो । उक्त गाडी प्रयोग गर्ने कर्मचारीको पहिचान खोली तत्काल आवश्यक कारवाही गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।